တစ်မိနစ်လောက်ပဲ အချိန်ပေးပါ |
Gym ကစားခွင့် @ Fit Pro Gym
၀၇-၀၂-၂၀၁၈ မှ ၁၁-၀၃-၂၀၁၈ ထိ
ဤဆုအား GCMoney(3000) ဖြင့် ကံစမ်းပါ။
Fit Pro Gym ၏ လိပ်စာ
:	No,16-B-1 Arriyamatgin Street,Yankin Township, Yangon 11081
: 09 785 044933
: 6:00AM To 9:00PM
Tuesday To Sunday (Closed on Monday !!!)
Facebook Page : https://www.facebook.com/fitprogym9/
Fit Pro Gym ၏ အမှာစကား
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ Fit Pro Gym မှ ဖြစ်ပါတယ်။
Fit Pro Gym တွင် ကစားနိုင်မည့် gym ကစားခွင့်ကူပွန် များ ကို ကံထူးရှင် (၁၉)ဦးအတွက် မဲဖောက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံစမ်းပေးမှုအတွက် အားလုံးကို ကျေး ဇူး အထူး တင်ရှိပါတယ်။ ပါဝင်ကံစမ်းသော မိတ်ဆွေများကိုလည်း Fit Pro Gym မှ နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ် ပါ သည်။
Gym ကစားဖို့ စဉ်းစားနေလား ဒါမှမဟုတ် စိတ်တိုင်းကျတဲ့ Gym မတွေ့သေးလို့ စိတ်ညစ်နေလား??
Weight-Gain လား? Body-Building လား?
စက်ပစ္စည်းကလည်းအစုံအလင်၊ အတွေ့အကြုံရင့် Personal Trainer တွေရဲ့ မိသားစုသဖွယ် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ နည်းစနစ်တကျ Train ပေးတဲ့ Fit Pro Gym က ချစ်ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ချင်းဆီကို အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှုတွေနဲ့စောင့်မျှော်နေပါတယ်နေ်ာ...
1 Month - 40000 ks
3 Months - 120000 ks
6 Months - 240000 ks
1 Year - 480000 ks
ဒါ့အပြင် သုံးလတစ်ကြိမ် Promotion Discount တွေလည်း ပေးနေတယ်နော်
** Weight gain, weight loss plan များအတွက်လည်း fees သီးသန့် ထပ်ပေးစရာ မလိုဘဲ မိမိ၏ Goal weight ရရှိသည်အထိ အတွေ့အကြုံရှိ Trainer ဆရာ ဆရာမများမှ Gym ဖွင့်ချိန်မနက် ၆:၀၀ နာရီ မှပိတ်ချိန်ည ၉:၀၀ နာရီ အထိ အချိန်ပြည့် တစ်ဦးချင်းကို ဂရုတစိုက်နဲ့ စနစ်တကျ သင်ကြားပေးနေတဲ့အတွက် Fit Pro ကို လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
signup ပြုလုပ်ရာတွင် ကျေးဇူးပြု၍ information များကို မှန်ကန်စွာ ဖြည့်ပေးပါ။
Get Chance တွင် signup ပြုလုပ်သည့် နာမည်သည် မှတ်ပုံတင်တွင်ပါသော နာမည်နှင့်မတူပါက၊ ၄င်း member မှာ ကံထူးရှင် ဖြစ်ခဲ့ပါက ဆုထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။
ကံထူးရှင်အတွက် ဆုမဲထုတ်ပေးရာတွင် အချိန်နှင့်နေရာကို mail ဖြင့် အကြောင်းကြားပေးခြင်း၊
https://www.facebook.com/GetChanceMyanmar တွင်ကြေငြာပေးခြင်းဖြင့် အကြောင်းကြား သွားပါမည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာမထုတ် ပါက (လုံးဝ) ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။
ပေါက်မဲပစ္စည်းထုတ်ရာတွင် ကံထူးရှင်မှ မှတ်ပုံတင်နှင့် တကွ လာရောက် ထုတ်ယူရပါမည်။
ဆုမဲဖောက်ပေးသည့်နေ့တွင် ကံထူးရှင်အား email ဖြင့်အကြောင်းကြားပေးမည်ဖြစ်ပြီး (၅)ရက်အတွင်း ပြန်လည်
အကြောင်းပြန်ကြားခြင်း မရှိပါက ကံထူးရှင်အဖြစ်မှ ပယ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကံထူးရှင်များအား ရွေးချယ်ရာတွင် Get Chance မိသားစုဝင်များ ပါဝင်ခွင့်မပြုပါ။
ဆုရွေးချယ်ရာတွင် (Get Chance Team)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သာ အတည်ဖြစ်ပါသည်။
စည်းကမ်းချက်များအားလိုက်နာမည်ဆိုပါက အောက်ပါ ဆုရွေးမည်ခလုတ်အား နှိပ်၍ ဆုစတင် ကံစမ်းနိုင်ပါသည်။
ဤဆုပစ္စည်းအား ကံမစမ်းခင် အရင်ဆုံး မှတ်ပုံတင်အမှတ်အား ဖြည့်ပါ။
*မှတ်ပုံတင်အား မှန်ကန်စွာ ဖြည့်ပေးပါ။ မှတ်ပုံတင် မမှန်ကန်ပါက ဆုပစ္စည်း ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။
GET CHANCE APK DOWNLOAD
GetChance APK ဖိုင်အား ရယူမည်လား
အမှတ်-၁ = GCMoney-၅၀၀၀
အမှတ်-၁၀ = GCMoney-၃၀၀၀၀
အမှတ်-၂၀ = GCMoney-၆၀၀၀၀
Choose your point11020
GCMoney သို့ ပြောင်းပြီးပါပြီ၊ GCMoney ပမာဏကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
GetChance © ၂၀၁၄